तपाईको बच्चालाई पढाईमा मन लाग्दैन ? बुधवारको दिन यसो गर्नुस – Etajakhabar
तपाईको बच्चालाई पढाईमा मन लाग्दैन ? बुधवारको दिन यसो गर्नुस
प्रायजसो धेरै बालबालीकाहरुमा विभिन्न किसिमको बिमारी देखा पर्ने गर्छ । ति बिमारीहरुमा सबै भन्दा गम्भीर विर्सने बिमारी हो । यसको कारणले तपाईलाई धेरै समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ । बालबालीकाहरु पढेर पनि अर्को दिन विर्सने गर्छन जसको कारण क्लासमा शिक्षक शिक्षीकाहरुले दिने सजाय भोग्नु पर्छ ।
पढ़ाईको ग्रह बुध : यदि तपाईको बच्चालाई पनि यस किसिमको समस्या छ भने चिन्ता नगर्नुहोस , गणेश रुद्राक्ष अपनाएर तपाई यि सम्पुर्ण समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार पढ़ाईको ग्रह बुध हो । यदि तपाई पढाइमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईको बुध ग्रह अनुकूल हुनु पर्छ । यदि बुध ग्रह अनुकूल भयो भने त्यो व्यक्तिको बुद्धि धेरै तेज हुने गर्छ ।
गणेश रुद्राक्षले गर्छ एकाग्रतामा बृद्धि
सामान्य प्रयास गर्नाले पनि धेरै सफलता मिल्छ । यदि तपाईको बुध अनुकूल छैन भने गणेश रुद्राक्ष धारण गर्नु धेरै फाइदाजनक सावित हुन्छ । गणेश रुद्राक्ष धारण गर्नाले बुधले अनुकूल फल दिन थाल्छ । गणेश रुद्राक्ष एकाग्रतामा वृद्धि गर्छ । स्मरण शक्ति र लेखन शक्तिलाई बढाउने गर्छ । यसको प्रभावमा आए पछि सामान्य प्रतिभा भएको विद्यार्थी पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुन्छन ।
हरियो रंगको धागोमा धारण गर्नुहोस गणेश रुद्राक्ष
गणेश रुद्राक्ष धारण गर्नु भन्दा पहिले त्यसलाई गाईको दुध र गंगाजलले धोएर विधिवत पूजा गर्नुहोस । पूजा गरिसके पछि गणपति अर्थवशीर्ष को पाठ गर्नुहोस . गणेश रुद्राक्षलाई अरु रंगको धोगोमा नभई हरियो रंगको धागोमा धारण गर्नुहोस । कुनै पनि महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने दिन बुधवार सर्वार्थ्सिद्ध योग हुने दिन आफनो बच्चालाई गणेश रुद्राक्ष लगाई दिनुहोस ।
यो पनि पढ्नुहोस : कसैले बुझेन ४७ वर्षअघि देखि लागेको यस आगोको रहस्य, नाम दिइयो ‘नरकको ढोका’!
यस पृथ्वीमा यस्ता स्थान रहेका छन जुन एकदम अनौठो र अचम्मको रहेको छ। कोहि आफ्नो सुन्दरता त कोहि अनौठो कला र आकृतिको कारणले हाम्रो ध्यानलाई आकर्षित पारिराखेको हुन्छ । यस्ता अचम्मको ठाउँ न त अन्य देशमै कमि रहेका छन। यस्ता आश्चर्यचकित स्थानको बारेमा यहाँहरुले सुन्नु, देख्नु या पढ्नु भएकै होला। आज हामी यहाहरुलाई यस्तो अचम्मको ठाउको बारेमा भन्ने छौ ।
यो ठाउँमा सबैभन्दा बढी मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको छ। यस अजिब र रहस्यमय स्थानको नाम नरकको ढोका दिइएको छ। यस स्थानमा पछिलो केहि दशक अघि देखि लगातार रुपमा आगोको ज्वाला बलिरहेको छ। यसको अझै पनि खासै त्यस्तो बैज्ञानिक रहस्य पत्ता लगाउन सकिएको छैन। आखिर के हो त यसको रहस्य , अनि कहाँ-कहाँ छ यस्तो रहस्यमय स्थानहरु? एकै छिन यसको कहानी बुझौ:
१९७१ मा सोवियत संघका बैज्ञानिक दरवेजे गाउँमा आएका थिए सोहि क्रममा उनले त्यस प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गरेका थिए। सोहि उत्खनन गर्ने क्रममा यस स्थानको उत्पति भएको विश्वास रही आएको छ।
तुर्किमिनिस्थानमा अवस्थित छ ‘नरकको ढोका’ : ‘नरकको ढोका’ तुर्किमेनिस्थाको ‘दरवेजे’ गाउमा अवस्थित रहेको छ। दरवेजेको अर्थ दरवाजा अर्थात् ढोका हुन्छ । सायद यसैको कारणले गर्दा यसको नाम दरवाजा शब्दसंग जोडिएको हो।
विषाक्त ग्यासको उत्पति : जहाँ उक्त दुर्घटना भएको थियो सोहि स्थानमा भयानक ग्यास बिस्फोटन भएर विषाक्त मिथेन ग्यासको उत्पति भएको थियो।
मिथेनमा लगाइयो आगो : उक्त ग्यासलाई नष्ट गर्नका लागि मिथेन ग्यासमा आगो लगाईएको थियो। वैज्ञानिकलाई यसबारे कुनै अन्दाजा रहेको थिएन कि त्यस ठाउंमा मिथेन ग्यासको भण्डार थियो भनेर।
सबैभन्दा ठुलो ग्यासको भण्डार : सबैभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यासहरूको भण्डार हो भनेर वैज्ञानिकले यस स्थानको अध्ययन गरेर पत्ता लगाएका हुन्।
चौडा आकारमा रहेको छ ‘नरकको ढोका’ : ‘नरकको ढोका’ २३० फिट चौडा र ७० फिट लामो छ। सधै ग्यासको उत्पति : बैज्ञानिकको भनाइ अनुसार यहाको हरेक मरुभूमि स्थानमा ग्यासको उत्पति भइरहेको हुन्छ।
यिनी थिए पहिले व्यक्ति: क्यानाडाका जर्ज कोरोनिस यस स्थानमा पहिलो पटक उत्रिएका थिए। उनले आफ़ो अनुभव देखाउनका लागि यो फोटो खिचाएका हुन र उनले यो पनि बताएका छन १००० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा त्यस्तो डरलाग्दो स्थानमा जानु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम हो।
२०१० मा गड्ढे भर्न आदेश दिइएको थियो : सन् २०१० मा तुर्किमेनिस्थानी राजनेता Berdimuhamedow ले यस क्रेटर (गड्ढे) को बन्द गर्न आदेश दिएका थिए। ताकि त्यहाँबाट प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्न सकियोस। तर आर्थिक अभावका कारणले गर्दा उक्त काम पुरा हुन पाएन।
पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र : पछिल्लो समय तुर्किमेनिस्थानको ‘डोर टू हेल’ आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन पुगेको छ। रातको समयमा यसको दृश्य हेर्नैको लागि सयौ मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ।
तुर्किमेनिस्थानको बारेमा जान्नुहोस : यहाको लगभग ७० प्रतिशत भू-भाग मरुभुमिले ढाकेको छ। यहाँ जम्मा ५ राज्यहरु रहेका छन् । स्थान दुर्घटनाजन्य स्थान रहेको छ। यहाँ जम्मा ५ राज्यहरु रहेका छ यहाको सबैभन्दा ठुलो राज्य अहल बेलायत हो जुन पनि पुरै मरुभुमिले ढाकेको छ।
Posted on: Friday, October 11, 2019 Time: 9:09:13
-15709 second ago
-15381 second ago
-14695 second ago
-14313 second ago
-13243 second ago
-12499 second ago
-11856 second ago